Ukuvavanywa kweLaser yeVS yoVavanyo lweNcwadi yesiNtu-Iindaba-zeChuanghe Fastener Co, Ltd.
Uvavanyo lweLaser lweVS yoVavanyo lweNcwadi yesiqhelo
Ixesha: 2020-08-13 Indawo: 38
The advantages of laser screening machine compared with traditional manual methods are as follows:
Phucula ukusebenza kokufumanisa:
Ngophuhliso kunye nokuphuculwa kweshishini, iimfuno zobungakanani bemveliso kunye nembonakalo nazo ziphezulu. Ukuba kusetyenziswa uhlolo olude olwenziweyo, ukudinwa kwamehlo ngokulula kukhokelela ekusebenzeni okuphantsi kunye nokuchaneka okuphantsi kokufunyanwa kwemveliso.
Ukuphucula ukuchaneka kohlolo:
Ukutshintsha umbono ongeyonyani ngomatshini wovavanyo lokujonga kungaphucula ukusebenza kwemveliso kunye nokuchaneka kokuhlolwa, kunye nokunciphisa iindleko zabasebenzi. Kwaye izixhobo zehardware zihlala zenziwe zenziwe kwaye zichanekile. Abathengi bafuna umgangatho ophakamileyo ophezulu kunye nokuchaneka kwamalungu. Ukusetyenziswa koomatshini bokuhlola i-laser ukusombulula lo mda kuye kwabanzima kakhulu ukuxhomekeka kuvavanyo olwenziweyo.
Ukunciphisa izinga ukuthunyelwa ezineziphene:
Umatshini wokuhlola weLaser unokubona izikrufu, amandongomane, iindawo ezijikayo, iindawo zokugaya, ii-standoffs, i-spacers, ii-washer, i-shafts njl.
Umsebenzi woMatshini wokuHlola oMbane:
Ingakwazi ukubona ngaxeshanye ubungakanani, ukubonakala, ubunzulu, kunye nemixube yezixhobo ezahlukeneyo okanye unyango lobushushu, izixhobo zokuhlola umfanekiso, ubulukhuni bonyango lobushushu zikwimigangatho.
2. Inokusetyenziswa ngokuzimeleyo nge-eddy yangoku kwaye ineendawo ezininzi ezimbi. Iyakwazi ukwahlula ubungakanani obubi kubunzima obubi bezinto.
3. Ukuhlolwa okukhawulezayo kwePCS ezingama-300-1200 ngomzuzu.
I-PREV: The specific use of different hex nuts
OKULANDELAYO : UNyaka oMncinci (ngeTshayina: Xiaonia)